VAOVAO: tobin'ny famonoana otrikaretina • tobim-pahadiovan'ny tanana METALCO
Tobim-pivontozana / tobim-pahadiovan'ny tanana dia zava-baovao amin'ny tolotra ataontsika ho singa iray trano maritrano kely. Vahaolana iray hanamora ny hetsika ny fanafoanana ny tanana sy fanariana fako.
Manasa sy manadio tanana ireto dia hetsika manan-danja amin'ny fisorohana mahomby amin'ny fihanaky ny bakteria pathogen sy otrikaretina, izay matetika eo amin'ny hoditry ny tanana.
Indrindra amin'ny fotoan-tsarotra ankehitriny valan'aretina coronavirus, fitantanana mahomby amin'ny fomba fidiovana sy ny fanadiovana ny tanana dia mandray anjara betsaka amin'ny fampihenana ny areti-mifindra sy ny fampihenana ny fihanaky ny pathogens, ary ity tsy amin'ny toeram-pitsaboana ihany, fa koa any amin'ny fivarotana, toeram-pivarotana, tranombakoka, zavamaniry indostrialy, kafe, hotely sy trano fisakafoanana, izany hoe na aiza na aiza misy vondron'olona lehibe kokoa.
Hitanisa ity pejy ity Ireo rafi-dratsy manjavozavo ho an'ny efitrano famafazana mampiasa ny fomba maina fog
Ny fanasana matetika sy amin'ny fomba feno sy famonoana otrikaretina amin'ny tanana alohan'ny hidirana amin'ny toeram-bahoaka mihidy, ary koa mandritra ny asa, ny fiantsenana sy ny hetsika hafa dia mitarika amin'ny fanesorana amin'ny fomba mandaitra ireo loto sy zavamiaina bitika bitika avy eny ambonin'ny tany.
Ny ankamaroan'ny otrikaretina, anisan'izany ny coronavirus izay miteraka ny aretina Covid-19dia rojotra RNA rakotra membra matavy, izay manamora ny fisorohana ny fihanahany sy ny aretina amin'ny alàlan'ny fampiasana simika toy ny savony sy ny bibikely.
Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fahasalamana manoro hevitra ny fanasana tànana mety amin'ny savony sy rano mandritra ny 30 segondra farafahakeliny ary ny fampiasana ny fanomanana ny famonoana miorina amin'ny min. Ny alikaola 60%.
Ho fanampin'izay, afaka miaro ny tenanao amin'ny otrikaretina ianao amin'ny alàlan'ny fampiasana azy fonon-tanana azo esorina, saron-tava manarona ny orony sy ny vava koa lamba vita amin'ny bibikely ny mahazatra sy mahaliana indrindra amin'ny foibe.
Ny dingan'ny fanasana sy famonoana tanana dia manena ny flora mikraoba misy amin'ny hodin'ny tanana amin'ny alàlan'ny famonoana otrikaretina simika.
Ny fikosehana ilay famonoana otrikaretina ao amin'ny hoditry ny tanana dia tokony haharitra 30 segondra ary tsy tokony hadinoinao ny habetsaky ny fanomanana, ary koa ny famonoana ireo toerana sarotra aleha amin'ny tanana, izany hoe ny elanelana misy eo amin'ny rantsantanana.
Fanasana matetika sy famonoana otrikaretina amin'ny tanana, na eo aza ny zava-misy fa ilaina amin'ny fiarovana antsikana izany aza, maina ny hoditry ny tanany, izay mety hiteraka fihenan'ny alika sy fivontosan'ny hoditra. Mba hampihenana ny voka-dratsin'ny famonoana otrikaretina ampiasaina amin'ny hoditry ny tanana, dia tokony hampiasaina ny fanomanana fanalefahana tanana mety.
Ho an'ny fanasana tanana dia ampiasao ny vokatra azo avy amin'ny hoditra.
hamonoana otrikaretina Ampiasaina amin'ny famonoana otrikaretina amin'izao fotoana izao ny fiomanana miorina amin'ny alikaola etil na propyl. Ny tsara indrindra dia misy ihany koa ny akora mahamando.
Ny savony sy ny dispenseran'ny famonoana otrikaretina dia avela doka tsy mifandray amin'ny famonoana otrikaina mety sy avo lenta.
COLOMBO Station feno
Ny tobim-pahadiovana (teboka misy fidiovana) dia vahaolana azo tanterahina sy kanto, mety ampiasaina amin'ny efitrano rehetra.
Ny fitaovantsika dia natao ho toy ny tobin'ny mpanadio tanana ary miaraka amin'izay koa dia teboka fitsinjarana ho an'ireo fitaovana ilaina amin'ny fielezan'ny COVID-19, toy ny fonon-tanana, saron-tava na lamba.
Ny tobin'ny disinpectiana dia misy fitaovana fanentanana anatinyizay manatanteraka asa fanariam-pako.
Ny tobim-pamonoan-jiro Metalco dia tsotra sy mora ampiasaina mba hampiasa rafitra izay tonga lafatra amin'ny toerana ho an'ny daholobe sy ny toerana tsy miankina, toy ny birao, foibe fiantsenana, sekoly, gym, trano fisakafoanana ary maro hafa.
Ankoatr'izay, ny tobin'ny disinfection dia fitaovana fanohanana manan-danja amin'ny fiatrehana ny toe-pahadiovana eo amin'ny toeram-piasana sy amin'ny fiarovana ny mpiasa tsirairay, mifanaraka amin'ny protocol ministra ho an'ny minisitra hampihena ny fihanaky ny coronavirus any amin'ny toeram-piasana.
Ny vahaolana ampiasaina ao amin'ny biraon'ny disinfection Metalco dia mamela ny fanamorana bebe kokoa ny fampandehanana ny otrikaretina. fanariana fako mora sy fahadiovana ary manao ny toerany ho azo ampiharina sy kanto, ary mety tsara koa raha ampiasaina amin'ny efitrano anatiny.
Ny vata fandaniam-pako dia mamela ny fanangonam-pahadiovana sy fanariana fako.
Ny fantsom-panafody Matalco dia mitondra:
dispenser fanomanana tanana
fonon-tanana azo esorina
Dimenan'ny tobin'ny disinfection (dikan-tongotra miaraka amin'ny tongotra):
Ny fahaizana anatiny: 60 lt
Lanja: manodidina ny 28 kg
Ny milina famonoana metalco dia vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy, ary misy rindrina eo anoloana amin'ny loko iray, raha toa kosa ny takelaka amin'ny lafiny 7 samihafa.
COLOMBO Full Station - kinova vy tsy misy fangarony
Ireto tobim-pamonoana otrikaretina ireto dia natao hampiasaina anaty trano ary misy amin'ny kinova roa:
miaraka amina rafitra ivelany ivelany vita amin'ny vy vy
miaraka amina ivelany ivelany vita amin'ny vy vita amin'ny vovony, misy lafiny iray milamina sy vita
Noho ny fampiasana milina disinfection mandeha ho azy any amin'ny toerana sy toeram-piompiana orinasa, andrim-panjakana ary toeram-piasana dia azo atao disifection tanana tsy mifandray.
Ny maodera fototra dia misy:
lavaka nialoha ny rindrina mialoha
efitrano iray misy varavarana midina eo anoloana ary mahazaka hametrahana ireo fitaovana ilaina (tavy, fonon-tanana azo itondrana, saron-tava)
varavarana fidirana misy varavarana roa fako
ambany azo refesina
BERING Ny vovoka midadasika
MAGELLANO Ny vahaolana azo zahana
Amin'ny fangatahan'ny mpanjifa dia azo atolotra ireto singa fanampiny ireto:
dispenser mandeha ho azy
satroka stainless vy mifehy
kodiarana efatra efatra fa tsy tongotra azo fehezina
Tranon-tsindrimandry / dispenser CABRAL
Izy io dia vahaolana azo tanterahina sy kanto azo ampiasaina amin'ny fampidirana anatiny sy / ivelany.
Ny dispenser dia misy fantsona aluminiary oval izay miendrika boaty gel disinfectant 8 litatra ary trano fonenana aluminium maty izay mametraka mpivarotra varahina vy / chrome.
Ny fototry ny fanohanan'ny tena dia vita amin'ny vy vita amin'ny galvanized vita amin'ny vovony vita amin'ny vovony toy ny dispenser.
Ho an'ny fampiasana tora-pasika, azo atao ny mametraka efitrano fandraisam-bahiny, vita amin'ny aluminium, ao anaty fantsom-bazaha misy sosona insuline sy sakamalaho iray miaraka amin'ny kofehy amin'ny toerana eo amin'ny fasika.
5 / 5 ( 47 vato )
milina famonoana kanseraTobin-tsokosoko famokarana tànanaBERING Ny vovoka midadasikatobim-pamindrana tanana tsy mifandray amin'ny tananatsy mifandray amin'ny dispenserVavahady ho an'ny famongorana ny tananaVavahadin'ny famonoana otrikaretinafanadiovana tanana fandidianaCOLOMBO Station fenodisinfection habakafanimbana tananadisinfection tanana tananadisinfection tanana tananadispenser tànan'ny tananaDiso-aretina ny homamiadanafamonoana tanana sy fitaovanatoromarika famongorana tananadisinfection tanana rehefatsikelikely ny famokarana homamiadanafamongorana tanana ayliffefamonoana tanana pdfranon-tànana famongoranafanomanana ny famongorana ny tananadisinfection tanana alohan'ny fanangonana radisinfection tànana amin'ny zaza vao terakaRossmann famongorana tananatetika fanadiovana tananadisulection ny homamiadanadisinpikan'ny tanana amin'ny alikaoladisinfection tanana ao amin'ny salon tsara tarehydisinfection tànana amin'ny gastronomydisinfection tànana ao amin'ny salonfanimbana tanana ao amin'ny hopitalyfihazanana tanana araka ny hoe izaCABRAL dispenserfanadiovana homamiadana ecolabfanadiovana tanana fidiovanafihadi-tànana sy fanadiovana tànanafanadiovana sy fanadiovana ny tananafanadiovana tanana sy fanadiovanafonon-tanana azo esorinarehefa disinfection ny tananaMAGELLANO Ny vahaolana azo zahanasaron-tavafanadiovana tànanamanasa sy manala tananafanasana tanana haccp sy disinfectionmanasa sy manala tanana amin'ny fampiasana ny fomba ayliffeny fanasan-tànana sy ny fihanaky ny otrikaretinamanasa sy manala voly amin'ny tanana tsara tarehyfanasana sy fanadiovana tanana ao amin'ny hopitalyfanasana tanana sy famongorana araky ny fomba Aylifferanoka ho an'ny famotehana tanana amin'ny zaza vao terakadisinfection tanana tsarateboka amin'ny fahadiovanafanadiovana tanana malotoschulke tanana disinfectionmanafoana lambadisviation tanana tananafihodinan'ny tanana ny hoditraDiso famonoana otrikaretinahamonoana otrikaretinaTobim-pivoaranaTobim-pivoaranaTobin-disinfection tananaFiantsonan'ny fahadiovanaTrano fitobiana fidiovanaTobim-pivontozanaTobim-pivontozanaTobim-pandringana MetalcoTobim-pivontozanaTrano fitobiana fidiovanamaina ny zavonatenzioro famonoana tananamanamarina ny maha-zava-dehibe ny fihazanana ny homamiadana amin'ny asan'ny mpanao voloVESPUCCIizay disinfection kanseraTobim-pamokarana tanana fanadiovana tananaSaniterer purell-tanana madiogel ho disinfection ny homamiadana